Tapered roller ဝက်ဝံ - တရုတ် Anrui Holding Group မှ
Tapered roller ဝက်ဝံအဓိကအား radial-based radial ကိုထမ်းများနှင့်ပေါင်းစပ်ဝန် axial ။ တစ်ခုတည်းအတန်း tapered roller ဝက်ဝံ၏စွမ်းရည်တင်ဆောင်လာသော Axial ဝန်အဆက်အသွယ်ထောင့်အပေါ်မူတည်ကြောင်း, ပြင်လက်စွပ် raceway ၏ထောင့်ဖြစ်ပါသည်, ထိုထောင့် သာ. သာ. ၎င်းသယ်ဆောင် capacity.Tapered roller ဝက်ဝံတဦးတည်းဦးတည် axial ဝန်ထမ်းများနှင့် axial ကန့်သတ်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ် တဦးတည်းဦးတည်ရိုးတံနှင့်အိုးအိမ်၏ရွှေ့ပြောင်းခံရ။ စွမ်းရည် loading angular အဆက်အသွယ်ဘောလုံးကိုဝက်ဝံ, tapered roller ဝက်ဝံနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ ...
Tapered roller ဝက်ဝံအဓိကအား radial-based radial ကိုထမ်းများနှင့်ပေါင်းစပ်ဝန် axial ။ တစ်ခုတည်းအတန်း tapered roller ဝက်ဝံ၏စွမ်းရည်တင်ဆောင်လာသော Axial ဝန်အဆက်အသွယ်ထောင့်အပေါ်မူတည်ကြောင်း, ပြင်လက်စွပ် raceway ၏ထောင့်ဖြစ်ပါသည်, ထိုထောင့် သာ. သာ. ၎င်းသယ်ဆောင် capacity.Tapered roller ဝက်ဝံတဦးတည်းဦးတည် axial ဝန်ထမ်းများနှင့် axial ကန့်သတ်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ် တဦးတည်းဦးတည်ရိုးတံနှင့်အိုးအိမ်၏ရွှေ့ပြောင်းခံရ။ angular အဆက်အသွယ်ဘောလုံးကိုဝက်ဝံနှင့်နှိုင်းယှဉ် tapered roller ဝက်ဝံတင်စွမ်းရည်မြန်နှုန်းကန့်သတ်အနိမ့်ဖြစ်ပါသည်, သာ. ကြီးမြတ်သည်။ Tapered roller ဝက်ဝံကျယ်ပြန့်ကြိတ်စက်, သတ္တုတွင်း, သတ္တုဗေဒ, ပလပ်စတစ်စက်ယန္တရားများနှင့်အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းများလှိမ့်, မော်တော်ကားများတွင်အသုံးပြုကြသည်။
ပုံမှန်ဝက်ဝံ အခြေခံပညာ Load factor ကန့်သတ် အလုံး ဝက်ဝံ
ဃ : D B, C CR ကော fo Gresse ဆီ အမှတ် အရွယ် အလေးချိန်
M12649 / 10 21,43 50,005 17,526 18,288 13,97 38.5 40 ၌ 0.28 8000 11000 0,169
30207 35 72 18,25 17 15 ငွေကြေး 55.5 63,5 15.3 5500 7400 0,328
32009 45 75 20 20 15.5 ပမာဏ 58.5 76.5 16.5 4800 6400 0,346
နောက်တစ်ခု: 8AT1 မော်တော်ယာဉ်ဝက်ဝံ
ဥယျာဉ်စိုက်ပျိုးခြင်း Tool ကိုဝက်ဝံစက်ရုံ
ဥယျာဉ်စိုက်ပျိုးခြင်း Tool ကိုဝက်ဝံ ထုတ်လုပ်သူ
ဥယျာဉ်စိုက်ပျိုးခြင်း Tool ကိုဝက်ဝံပေးသွင်း